यदि तपाईको घरमा पनि पैसाको कमी छ ! छ भने यस्ता बस्तु राख्नुहाेस,, « Naya Bato
यदि तपाईको घरमा पनि पैसाको कमी छ ! छ भने यस्ता बस्तु राख्नुहाेस,,
एजेन्सी । पैसा यस्तो वस्तु हो जसको आवश्यकता हरकोहिलाई हुन्छ । हरेक व्यक्ति धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन लालायित हुन्छन् जसबाट हरेकले आफ्नो आवश्यकताको चिज पूरा गर्न चाहन्छन् ।
यदि तपाईको घरमा पनि पैसाको कमी छ भने वास्तुदोषलाई नियन्त्रण गरेर तपाई आफ्नो आर्थिक अभावलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ । वास्तुशास्त्रमा यस्ता केही उपाय बताइएको छ जसबाट तपाईको आर्थिक समस्या हटाउन सकिन्छ ।
घरमा लाफिंग बुद्ध राख्नुहोस्
वास्तुशास्त्र अनुसार, लाफिंग बुद्ध घरमा राख्नाले पैसाको अभाव हटेर जान्छ । यसलाई समृद्धिको देवता भनिन्छ । घरमा एउटा लाफिंग बुद्धको मूर्ति राख्नाले पैसाको साथसाथै खुसीयालीमा पनि बढोत्तरी हुने मान्यता रहिआएको छ ।
कसैको घरमा यदि वास्तुदोष छ भने विन्ड चाइमको प्रयोगले यसलाई हटाउन सकिन्छ । विन्ड चाइमलाई घरमा लगाउनाले कयौँ फाइदा हुन्छ । यदि कसैको घरमा नकरात्मक उर्जा छ भने यसलाई ढोकामा लगाउनाले वास्तुदोषबाट मुक्ति मिल्ने मान्यता रहेको छ । यसका साथै यसको प्रयोगले धनमा वृद्धि समेत हुन्छ